सविता मृत्यु प्रकरण : बहिनीले यस्ता भिडियो सहित सार्वजनिक गरिन ससुराको कर्तुत ! - समृद्ध नेपाल
केहि घण्टा भित्रै माईति पक्ष सम्बन्धित अस्पता पुग्छ जहा सबिताको सब पोष्टम्याटमका निम्ति अस्पतालमा पुर्याइएको हुन्छ। सबिताको माईति पक्षका अनुसार, जहाँ प्रहरीले उनीहरुलाई सबको फोटो खिच्न्न मात्र हैन राम्रोसंग अन्तिम पल्ट हेर्न समेत दिएन।
मृतक सबिताको कलेज कि एक साथीका अनुसार उक्त साथीको घरमा सबिता आउने जाने गर्थिन। सबिताको उक्त परिवारमा निकै आत्मीय सम्बन्ध रहेको थियो। त्यस्तै यस घटनाको केहि समय अघि पनि सबिता ति साथीको घरमा गएकी थिइन्। उक्त साथीका अनुसार त्यस दिन सबिताको शरीरमा नि’ला डा’म’हरु देखेर उनले के भको? भनेर सोधिन सबिताले जबाफ दिन (श्रीमान ) उहाले हिजो र’क्सि’को न’शा’मा हो’स् गु’माउनु भयो। सबिताले यतिमात्र बोलिन।
उदयपुरको सान, ताप्ली पोखरीको पहिचान !
इलामका चर्चित समाजसेबि डम्बर खड्काले ४ वटा हायस बाट काठमाडौंमा अलपत्र परेकालाइ घर सम्म पुराउने।
कोरोनाले आतंक मच्चाई रहेका बेला काठमाडौंमा पक्राउ परे यस्ता डरलाग्दा !
विश्ववाट ठूलो खतरा टर्यो, मालदिभ्समा खस्यो रकेट !
मोदी घाटमा लडेको भिडियाे भाइरल ! नेपालीको आशुले मोदीलाई पोले जस्तो छ !
ट्रम्पलाइ लाग्यो महाभियोग पहिलो टिप्पणीः वाह वाह
हुलाकी सडक : हस्तान्तरण गरेको अढाई महिना नवित्दै भत्किन थाल्यो सडक
घर बाट बुटवल जाने भनि हिडेको बालक बेपता !
आफैंले तयार गरेको चितामा आफैं जल्नुपर्दा हे दैब कसलाई पनि यस्तो नहोस !